Photoshine v4.2.0 (ဓါတ်ပုံတွေကို ဘက်ဂရောင်း လှလှလေးတွေနဲ့ ဒီဇီုင်းမျိုးစုံ ဖန်တီးရအောင်) ~ မိုးညိုသား
Photoshine v4.2.0 (ဓါတ်ပုံတွေကို ဘက်ဂရောင်း လှလှလေးတွေနဲ့ ဒီဇီုင်းမျိုးစုံ ဖန်တီးရအောင်)
3:36 AM နည်းပညာ, ဆော့ဝဲလ်များ No comments
25 Nov 12, 06:13 PM
ဒီိဆော့ဝဲလ်အတွက် Key တွေကို အရင်တုန်းကလည်း ခဏခဏ ရှာဖူးပါတယ်.. ရလာတဲ့ Key တွေက အဆင်မပြေပါဘူး.. ဒီနေ့တော့ ဒီကောင်လေးကို ပြန်ရှာတော့ သူ့အတွက် patch နဲ့ဖူးဖြစ်အောင် လုပ်ပြီး အသုံးပြုလို့ ရမယ့်ကောင်လေး ရလာပါတယ်..။ ကျနော်စမ်းကြည့်တော့ အဆင်ပြေတာနဲ့ ဒီ Photoshine ဆော့ဝဲလ်ကို patch ဖိုင်နဲ့အတူ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. မိမိတို့ရဲ့ ပုံလေးတွေကို နောက်ခံဒီဇိုင်းမျိုးစုံနဲ့ ဖန်တီးချင်တဲ့သူများအတွက် ဒီိကောင်လေးက လူတိုင်းကြိုက်လို ဖြစ်နေပါတယ်..။ သူ့ထဲမှာ ထည့်ပေးထားတဲ့ Patch နဲ့ဖူးဖြစ်အောင် လုပ်နည်းကို အရင်ပိုစ့်တွေမှာလည်း လုပ်ပြပေးခဲ့ပြီးပါပြီ.. ဒီပိုစ့်မှာတော့ Patch ဖိုင်ထည့်နည်းက အရင်ပိုစ့်တွေနဲ့ အတူတူပဲဆိုပေမယ့် နည်းနည်းလေး ပိုလာလို့ ကျနော်ပုံလေးတွေနဲ့ ပြန်ပြပေးလိုက်ပါတယ်.. လိုအပ်တဲ့သူများ အောက်ကလင့်ကနေ ဒေါင်းယူလိုက်ပါဗျာ.. ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 29.8 MB ရှိပါတယ်..
အောက်ကလင့်တွေကနေလည်း.ယူနိုင်ပါတယ် ကိုညီ့ဆိုဒ်ကနေ ရှယ်လာတာပါ
Solidfiles | Ziddu | Filecloud | Tusfiles | Mirrorcreator
ဒီကောင်လေးကို Install ထည့်ပြီးတဲ့အခါ အပေါ်ပုံအတိုင်း အမှန်ခြစ်တွေ ဖြုတ်ပြီးမှ Finish ပေးပါ.. ပြီးရင်တော့ အောက်ကပုံအတိုင်း Desktop ကသူ့ရဲ့ Icon လေးပေါ်မှာ Right Click ထောက်ပြီး Properties ကိုကလစ်ပါ..
ပေါ်လာတဲ့ ဘောက်စ်ထဲမှ 1 နေရာမှ Open File location ကို ကလစ်ပါ.. ပြီးရင်တော့2နေရာက ဒီကောင်လေးကို ဒေါင်းယူတုန်းက ပါလာတဲ့ ဖိုင်ထဲမှ patch ဖိုင်ကို Right Click နဲ့ copy ယူပါ.. ပြီးရင်3နေရာမှ လွတ်တဲ့နေရာမှာ Right >> paste နဲ့ထည့်ပါ..။
အပေါ်ပုံတိုင်း ပေါ်လာရင် Continue ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ.. ဒါဆိုရင် အောက်ကပုံအတိုင်း patch ဖိုင်လေး ရောက်လာရင် အဲ့ဒီပေါ်မှာ Right Click >> Run as administrator ကို ကလစ်ပေးလိုက်ပါ..
အောက်ကပုံအတိုင်း ပေါ်လာရင် patch စာသားကို ကလစ်ပါ..
Replace Patch ဆိုပြီး အောက်က ပုံအတိုင်း ဆက်ပေါ်လာရင် photoshine ပုံပန်းရောင်လေးကို တချက်ကလစ်ပြီး Open ကိုထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ..
ဒါဆိုရင်တော့ အောက်ကပုံအတိုင်း PATCHIN DONE စာသားပေါ်လာတဲ့အခါ Exit နဲ့ ထွက်လိုက်လို့ ရသွားပါပြီ...
ပြီးရင်တော့ ဘေးကဘောက်စ်တွေ အားလုံးကို ပိတ်ပစ်ပြီး အောက်ကပုံလေးအတိုင်း Apply >> OK ပေးလိုက်ပါ.. ဒါဆိုရင် ဒီကောင်လေးကို Full သုံးလို့ ရသွားပါပြီ..။
အားလုံးပဲ ဓါတ်ပုံလှလှလေးတွေ ဖန်တီးရင်း ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေဗျာ..
ဓာတ်ပုံ ဝါသနာအိုးများအတွက် ကိုလွင်မင်းဗိုလ် ဆိုဒ်ကနေယူလာတာပါ. အဆင်ပြေပါစေ